Nhau - Gluing uye yekuchenesa nzira yePUR inopisa inopisa inonamira laminating muchina
Gluing uye yekuchenesa nzira yePUR inopisa inopisa inonamira laminating muchina
Iyo PUR inopisa-yakanyunguduka inonamatira unamatira laminating muchina inoshandisa 100% yakasimba inopisa-yakanyunguduka inonamira isina zvigadzirwa zvinokuvadza. Mushure mekupiswa mukati memvura yemvura, yakafanana uye inogara yakaputirwa pamusoro pebasa kuti riite chinangwa chekunamatira. . Zvinoenderana zvakasiyana zvekugadzirisa zvinhu, akasiyana mafomu ekumhanyisa senge kugovera, kupuruzira nekuumburura, uye fiber bemhapemha inogona kusarudzwa zvichiteerana. Nekuda kwekushanda kuri nyore kwemidziyo, yakavimbika uye inokurumidza kubatana, kukwirisa kushanda, yunifomu yekumwa mashandisiro, yakaderera glue kunwa, hapana kusvibiswa kune zvakatipoteredza, uye kutevedzera zvazvino kudzivirirwa kwezvakatipoteredza, zvave zvichishandiswa kugadzira shangu, kurongedza, dehwe zvinhu, mabhokisi emapepa, zvishongedzo, uye zvekuvaka. , Midziyo yemitambo, zvigadzirwa zvehutsanana, matoyi, zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, dehwe, fanicha uye mamwe maindasitiri ari kuwedzera kusarudzwa sekutsigira michina yekugadzira.
Kuchenesa nzira Kupfeka banga rekuchenesa musoro: Mushure mekunge mudziyo wapisa, pukuta neakaoma gauze.
Roller yekuchenesa: pukuta iyo isina simbi roller ine yakachena yakaoma gauze yakanyikwa mu75% doro, kana paine glue pamusoro, shandisa yakaoma gauze rakanyikwa muna 1620 solvent / ethyl acetate solvent kupukuta;
Iyo glue iri pamusoro peiyo irabha roller haifanirwe kurapwa ne organic solvents, kuti irege kukuvadza irabha roller, inofanira kubviswa ne yakasimba kurapa kunamatira.
Kunze kwepasi kwemidziyo; nzira yekuchenesa: shandisa yakachena yakaoma gauze yakanyikwa mu75% doro kupukuta.
Chinja batch yekuchenesa: Chenesa iro gundi bhokisi uye hosipaipi yePUR inopisa inonamira inonamatira yekumonera muchina (zvinoshanda pakushandura glue modhi uye nzira yekunamatira): Mushure mekubvisa iyo yekutanga glue, wedzera iyo itsva glue 2 ~ 3Kg, uye ipise iyo kusvika yapera kunyungudika. Hamuna chinhu, wobva wawedzera mhando nyowani yeglue, mushure mekunyungudika zvachose, dhonza kanenge 1Kg kuti utange kugadzirwa zviri pamutemo.
Kupfekedza banga rekuchenesa musoro (zvinoshanda pakushandura glue modhi uye nzira yekunamatira): Mushure mekunge mudziyo wapisa, shandisa yakaoma gauze kupukuta.
Roller mune inonamira nzvimbo yemubatanidzwa: Shandisa yakachena yakaoma gauze kupukuta guruva pamusoro. Kana glue ikawanikwa pamusoro, usashandise manyowa anodzivirira kudzivirira kukuvara kune irabha roller. Shandisa yakasimba kurapa kunamatira kuti ubvise.
Kuchenesa chigadziro chekorona: Mushure mekusimbisa kuti simba rakadzimwa, ripukute negirazi yakachena yakaoma yakanyikwa mu75% doro.
Yisiri-yakatarwa kutenderera kuchenesa kwePUR inopisa inyauka inonamira yekumatira laminating muchina: iyo yekumusoro musoro wePUR inopisa inyauka inonamira yekumatira laminating muchina inofanirwa kucheneswa kana nzira yekunamatira uye glue chikamu chikamu chinoshanduka, uye iyo yekumusoro musoro inofanirwa kubviswa pamberi peglue kusimbiswa. . , Shandisa yakaoma gauze rakanyikwa mune solvent kupukuta musoro wakachena. Kana iyo michina ikavharwa panguva yekugadzirwa, iyo yekufashukira glue inofanira kupukutwa neiyo yakachena gauze kana michina yakavhurwa. Chenesa iyo firita chidzitiro chePUR inopisa inyauka inonamatira inonamira uye laminating muchina kwehafu yemwedzi. Kuchenesa iyo firita skrini yeiyo yekumusoro musoro wePUR inopisa inyauka inonamatira inonamira laminating muchina.
Kugadzirwa kwave kwakamiswa kweinopfuura mwedzi mumwe, uye zvese zvekumachisa michina zvinofanirwa kucheneswa zvinoenderana nezviri mukati uye zvinodiwa zveve pamusoro zuva nezuva, pamberi uye mushure mekuchinja batch, hafu yemwedzi uye isina-yakatarwa yekuchenesa kutenderera isati yaiswa mukushandisa; yePUR inopisa inopisa inonamatira inonamira laminating muchina glue Mushure mekubvisa iyo yekutanga gingi, wedzera nezve 30Kg yemuchena chicherwa mafuta kunyungududza zvakasara zveglue. Mushure mekudurura, wedzera nezve 30Kg yemafuta machena emaminera kuti unyungudise zvakare, uye mirira kuti ishandiswe mushure mekubviswa zvachose.
Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Anonyorera,